बुहारीले ससुरालाई छुरा प्रहार गरिन गुल्मीमा !! – Complete Nepali News Portal
बुहारीले ससुरालाई छुरा प्रहार गरिन गुल्मीमा !!
September 14, 2017	397 Views
गुल्मी, भाद्र २८ । गएराती गुल्मीको आँपचौरमा बुहारीले ससुरालाई छुरा प्रहार गरेर सख्त घाईते बनाएकी छन् । मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्वर ५ आँपचौरको खर्वाङ भन्ने गाउँकी ४० वर्षिया गोमा परियारले ५८ वर्षिय ससुरा तुलबहादुर परियारको टाउकोमा छुरा प्रहार गरेकी हुन् ।
मजुवा ईलाका प्रहरी कार्यालयका असई रमैया यादवका अनुसार घाईते ससुराको टाउकोमा डेढ ईन्च गहिराईको चोट लागेको छ । हिजो राती नै उनलाई मजुवाको रुद्रवती अस्पतालमा उपचारको लागि ल्याईएको थियो । हिजो साँझ तुलबहादुरले नातीलाई हप्काउँदै एक दुई थप्पड पनि लगाएको रिसले बुहारीले एक्कासी ससुरालाई टाउकोमा छुरा प्रहार गरेको असई यादवले जानकारी दिए ।
अहिले विहान छलफल चलिरहेको उनले बताए । उनको छोरा युद्धविर पनि घरमै थिए । उनिहरु छुट्टिएर अलग अलग बस्दै आईरहेका छन् ।